अर्थ Archives - RoadMapNews
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष दशैंका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ । प्रतिकुल परिस्थितिमा नयाँ नोट साट्न सर्वसाधारणहरु लामबद्ध हुँदा जोखिम बढ्ने भन्दै यस्तो निर्णय ...
कोरोना कहरका कारण अधिकांश बैंकहरुको नाफामा गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा असार मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकहरुको नाफा घटेको देखिन्छ । बैंकहरुले सार्वजानिक गरेको पछि...
ललितपुर । श्रीलालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीलाई नेपाली काँसले बित्तिय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको सचिव पदमा मनोनयन गरेको छ । दुई दशकदेख...
काठमाडौं । सरकारको काममा आशा र निराशा, दुबैको अवस्था बराबर छ । पार्टीभित्रै आलोचित बनेको सरकार परिवर्तनको अभ्यास एकातिर छ भने सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरुको हिसाब किताब अर्कातिर छन् । नेपाल ...
चन्द्र ढकालहरुको अत्याचारका कारण देशकै ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमइबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु राजीनामा ठेल्दै हिड्न थालेका छन् । उनी भने बैंक तथा बीत्त कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई धमाधम जागिरबाट गलहत्याएर न...
लगानी बोर्डमा १२ भेट्रानको भीडन्त,कस्ले मार्लान बाजी ?
महाप्रसाद अधिकारी लगानी बोर्ड छाडेर गर्भनर नियुक्त भएसँगै त्यहाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खान १२ भाइले खुट्टा उचालेका छन् । त्यहाँ जान तम्सनेहरुमा जलविद्युतका एजेण्टहरुदेखि बैंकर,पूर्व प्रशासक र नेताह...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दै पुनर्कर्जा व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिएर मौद्...
काठमाडौं । लोमस फर्मास्युटिकल्स र होम एण्ड अफिस सेफ्टीले घर र कार्यालय सुरक्षाको लागि अटोमेटिक डिस्पेन्सर ल्याएका छन् । चीनको नम्बर एक कम्पनीबाट डिस्पेन्सर झिकाईएको पनि जनाएको छ । ह्याण्ड एक्स डिपार्...